Myanmar Safe Work for Youth - Training Kit (second edition)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကလေးအလုပ်သမား စောင့်ကြည့်လေ့လာစစ်ဆေးမှုစနစ် ( CLMS) တစ်ရပ် ပြဌာန်းရေးအတွက် ရွေးချယ်စရာ နည်းလမ်းများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းစီမံချက် (NAP ) အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီသွားရန် ရည်ရွယ်ပြီး ILO ၏ မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမားပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အစီအစဉ်(MyPEC) က ဤလေ့လာမှုကို ပြုလုပ်ရန် ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ တွင် NAPကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန (MOLIP)၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကလေးအလုပ်သမားဆိုင်ရာ နည်းပညာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (TWG-CL) ၏ လမ်းညွှန်ချက်အောက်တွင် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများစွာတို့က ရေးဆွဲချမှတ်ခဲ့သည်။
Assessment of options for establishingachild labour monitoring system (CLMS) in Myanmar
This study was commissioned in 2019 by the ILO’s My_PEC project in Myanmar to support the implementation of the National Action Plan on Child Labour (the NAP) in Myanmar. The NAP was developed in 2017-2018 by multiple national organizations under the guidance of the Technical Working Group on Child Labour (TWG-CL) and led by the Ministry of Labour, Immigration and Population (MOLIP).
Assessment of Drivers and Constraints for Occupational Safety and Health in the Construction Global Supply Chain in Myanmar
Vision Zero Fund aims to prevent and reduce work-related accidents, injuries and diseases by strengthening public frameworks and establishing sustainable business practices in global supply chains (GSCs). Vision Zero Fund Myanmar Phase II started in May 2020 and will be implemented until April 2023. Based on stakeholder consultations, the project will start activities inathird GSC – namely, construction.
COVID-19 and Child Labour in Myanmar
Working with Kantar Public Information Myanmar, the International Labour Organization conducted remote fieldwork to understand the impact that COVID-19 has had – and will continue to have – on the incidence and dynamics of child labour in Myanmar. The study took place between July 2020 and January 2021 in six states and regions: Ayeyarwady Region, Bago Region, Kayin State, Mon State, Shan State and Yangon Region.
Child Labour and how you can help
1 in 11 children are trapped in child labour in Myanmar, with half of these children subjected to hazardous conditions. Child labour : deny children education, is harmful to their health and development, and can be deadly. It prevents children, communities and the country from progressing. It is also illegal. At the International Labour Organization (ILO), we believe inabrighter future for children and for Myanmar. There isapressing need to eliminate child labour.
Child Labour in Myanmar, A Legal review
This brochure is based on the edition of the legal review of national laws and regulations related to child labour in light of international standards in Myanmar, which was conducted in 2020. It covers the period up to December 2020.
အန္တရာယ်ရှိသောပိုးသတ်ဆေးများကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ထောက်ခံအကြုံပြုချက်များ
Vision Zero Fund (VZF) သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလမှစတင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် အဓိကအားဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းများ၊ ချင်းသီးနှံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးတန်ဖိုးမြှင့်ကွင်းဆက်လုပ်ငန်းတို့တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတုပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် တောင်သူများအား ထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး ချင်းသီးနှံကုန်စည်တန်ဖိုးမြင့်ကွင်းဆက်တွင် အရေးပါသော လုပ်ငန်းခွင် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး (OSH) စိုးရိမ်မှု ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
ပိုးသတ်ဆေးများ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ - မြန်မာနိုင်ငံမှ သင်ခန်းစာများ
Vision Zero Fund (VZF) သည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မေလမှစတင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းသည် အဓိကအားဖြင့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ ချင်းသီးနှံနှင့် ဆောက်လုပ်ရေးတန်းဖိုးမြင့် ကွင်းဆက်တို့တွင် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ချင်းသီးနှံ ကုန်စည်တန်ဖိုးမြင့်ကွင်းဆက်တွင် စိုက်ပျိုးရေးသုံး ဓာတုပစ္စည်းများ ကိုင်တွယ်ခြင်းသည် တောင်သူများအား ထိခိုက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေပြီး အရေးပါသော လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးနှင့် ကျန်းမာရေး (OSH) စိုးရိမ်မှုဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် VZF သည် ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများ သက်တမ်းစက်ဝန်းတလျောက် (ဖော်စပ်ခြင်း၊ ထုတ်ပိုးခြင်းမှ စွန့်ပစ်သည်ထိ) ဓာတုပိုးသတ်ဆေးများကို စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သက်ဆိုင်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေများနှင့် မူဝါဒများ၊ မူဘောင်များကို သုံးသပ်လေ့လာမှုတစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ အလုပ်သမားဥပဒေများ နှင့် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ (မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ)
ဤသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရှင်းလင်းချက် မှတ်စုသည် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ၏ ဥပ‌ဒေဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများ၏ အကျဉ်းချုပ်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။
Myanmar Labour Laws and COVID-19 (FAQ)
With the widespread transmission of COVID-19 in 2021 including more transmittable strains, more than ever, workplaces need practice measures to eliminate the risk of spread and harm to people in workplaces.
Pesticide safety in action: Lessons from Myanmar
Vision Zero Fund isaproject on occupational safety and health (OSH) working in Myanmar since May 2017 in the garment, ginger, and construction value chains. Handling agrochemicals brings risks to farmers and has beenasignificant OSH concern in the ginger value chain. Asaresult, in 2020, VZF commissionedastudy to evaluate Myanmar’s legislative and policy framework related to the management of agrochemicals throughout their lifecycle (from formulation and packaging to disposal).
Banning Hazardous Pesticides: Recommendation for Myanmar
Vision Zero Fund isaproject on occupational safety and health (OSH) working in Myanmar since May 2017 in the garment, ginger, and contruction value chains. Handling agrochemicals brings risks to farmers and has beenasignificant OSH concern in the ginger value chain.
Standing Orders concerning the procedure for the examination of representations under articles 24 and 25 of the Constitution of the International Labour Organization (In Burmese language)
The publication is intended to beasupporting document for Burmese speakers who wish to refer to the standing orders concerning the procedure for the examination of representations.
Special procedures for the examination in the International Labour Organization of complaints alleging violations of freedom of association - Annex I (In Burmese Language)
လွတ်လပ်စွာအသင်းအပင်းဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများကို စွပ်စွဲသည့် တိုင်ကြားချက်များအား စစ်ဆေးမှုအတွက် အထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ရည်ညွှန်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစာစောင်ကို ပြုစုထုတ်ဝေသည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ်ခွဲ ၂၄ နှင့် ၂၅ တို့အရ ကိုယ်စားပြုတင်ပြတောင်းဆိုခြင်းများကို စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် တည်ဆဲဥပဒေများ
ကိုယ်စားပြု တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းများကို စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် တည်ဆဲဥပဒေများကိုရည်ညွှန်းနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဤစာစောင်ကို ပြုစုထုတ်ဝေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရာဂါ၏ ရိုက်ခတ်မှု - အထည်ချုပ်လုပ်ငန်း ကဏ္ဍရှိ အလုပ်ထုတ်ပယ်ခံရသည့် အလုပ်သမားများ ဆိုင်ရာလေ့လာချက်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်များနှင့် အသက်မွေးမှုအတွက် အဓိကဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသည့် အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းကဏ္ဍသည် ကိုဗစ် - ၁၉ ကပ်ရောဂါ ၏ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကို ခံစားခဲ့ကြရသည်မှာ အထင် အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။
Philippines (21) Brunei Darussalam (16) Global (12) Bangladesh (6) India (5) Japan (4) Sri Lanka (4) Pakistan (4) Korea, Republic of (3) Fiji (3) Nepal (3) China (3) Solomon Islands (2) Mongolia (2) Vanuatu (2) Marshall Islands (1) Arab States (1) Cook Islands (1) Bhutan (1) Timor-Leste, Dem. Rep. of (1) Papua New Guinea (1) Micronesia (1) Samoa (1) New Zealand (1) Tuvalu (1) Australia (1) Kiribati (1) Tonga (1) Europe (1)